အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: နိုဝင်ဘာလ
တီချမ်း နဲ့ အမေးအဖြေ
ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက် မြန်မာပြည် ခဏ ပြန်တုံးက အရင် ကိုယ် မြန်မာပြည်မှာနေတုံးက လုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ အန်ဂျီအို အဖွဲ့တခုက မြန်မာပြည်တွင်းမှာ ရှိတဲ့ MSM (Men who have sex with men) လိင်တူချင်း ဆက်ဆံတဲ့သူတွေထဲက ခေါင်းဆောင်ပိုင်းနေရာမှာ လုပ်နေတဲ့ လုပ်ခဲ့တဲ့ သူတွေကို စုပြီး ပြက္ခဒိန်တခု ထုတ်ချင် ပါတယ်တဲ့။ အဲ့တာကတော့ အန်ဂျီအို လုပ်ငန်းတွင်းသုံးပေါ့ အစိုးရပိုင်းတွေ ယူအန်တွေလဲ ဝေတဲ့ ဟာမျိုးပေါ့။ အဓိက ကတော့ MSM ကွန်မျူနတီတွေထဲမှာ ဝေတာပေါ့။ တခြား MSM တွေက ကိုယ်တွေကို အားကျ အတုယူဖို့ ပေါ့ စသဖြင့်တွေ ရည်ရွယ်တာပေါ့လေ။ ထုတ်ဝေတာကတော့ စီမံချက်ကန့်သတ်ပါ။ ကိုယ် အပါအဝင် စုစုပေါင်း ခေါင်းဆောင် အဖြစ် လုပ်နေတဲ့ MSM ၁၃ ယောက်ပါပါတယ်။ မတူတဲ့ ဧရိယာတွေကပေါ့။ ဥပမာ အန်ဂျီအို ထဲက ပါမယ်။ လူထု အရပ်သား ပြည်သူထဲက ခေါင်းဆောင်တွေပါမယ်။ မိတ်ကပ် ပညာရှင် ပန်းပညာရှင်တွေ ထဲက ပါမယ် စသဖြင့်ပေါ့။ နယ်တွေကလဲ ပါပါတယ်။ မေးတာကတော့ မေးခွန်း ၄ ခု ကို ဖြေပေးရတာပါ။ မေးခွန်းတွေကတော့ ပရင့်တော့ မပါလာတော့ဘူး ချန်ခဲ့တယ် ထင်တယ်။ ကိုယ်ဖြေတာတွေက များနေတော့ သူတို့ တချို့ ကို ဆင်ဆာ လုပ်လိုက်တယ်။ နေရာ အကျယ်ကြောင့်ပေါ့။ ကိုယ်က စလုပ်ကတည်းက တခု တောင်းဆိုလိုက်တာ ကိုယ့်ကို နိုဝင်ဘာလ ပေးပါလို့ ကို်ယ့်မွေးလ မို့လို့ပါ။ ပုံလေးကတော့ မွေးစားသား ရိုက်ပေးထားတာပါ ဟွာဟင် သွားကြတုံးက ဘလက်ကင်နျန်မှာ ထင်တယ် အော်ပုံက ပိုလှတယ်။ ထည့်ပေးထားတယ် ကြည့်လိုက်။ ပုံကို ထောက်ပြီး ဘတ်ရင်လဲ ရတယ်။ သို့သော် နေရာမဆန့် လို့ ဖြုတ်ကျန်ခဲ့တာတွေပါ အကုန်ဘတ်နိုင်အောင် ပြန်ထည့်ပေး
ထားတယ်။ အောက်မှာ လဲ အရင် အင်တာဗျူး လုပ်ဘူးတဲ့ ပုံတွေထည့်ထားပေးပါတယ်။ တစု တစည်းထဲ ပြန်ဘတ်ရအောင်ပါ။ နောက် အရင်က တခါ တင်ဖူးတဲ့ ပေါ့စတစ်တွေ ချည်းပဲ အတွက် လုပ်တာ တခု ကိုလဲ ဒီမှာ သွားဘတ်နိုင်ပါတယ်နော်။ နောက်တခုက တီချမ်းအကြောင်း တစေ့တစောင်း ဆိုတာ ဒီမှာ ဘတ်ပါ။
ကြော်ငြာတာ မဟုတ်ပါ။ နာမည်ကြီးပြီးသားက ဘာကြော်ငြာစရာလိုမလဲနော်။
MSM ဖြစ်ရတာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ?
MSM ဖြစ်ရတာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဘယ်လိုမြင်သလဲလို့မေးလာတော့ ဘယ်လိုမှမနေပါဘူး။ တခုခုမြင်တယ်ဆိုတာ အဲ့တာ သူများနဲ့ မတူလို့ပေါ့။ ထူးခြားနေလို့ပေါ့။ MSM ဆိုတာလဲလူတွေထဲက လူပဲ အဲ့တော့ ဘယ်လိုများထူးပြီးမြင်နေစရာလိုမလဲနော်။ ယောကျာ်းဖြစ်ရတာ ဘယ်လိုမြင်လဲလို့ မိန်းမဖြစ်ရတာ ဘယ်လိုမြင်လဲ လို့ ဘယ်ယောက်ျား ဘယ်မိန်းမ မှ အမေးမခံရဖူးဘူး လို့ ထင်တာပဲ။ မေးရင်လဲ တော်တော်ကြောင်မယ် အဲ့တော့ ကိုယ်လဲ လူထဲကလူတယောက်ဖြစ်တဲ့ အတွက် ဘယ်လိုမှမမြင်ပါဘူး။ MSM ဖြစ်တာ ယောက်ျားမိန်းမတွေနဲ့ ဘာမှ မထူးခြားပါဘူး။ ယောက်ျားတွေက မိန်းမကြိုက်တယ်၊ မိန်းမတွေက ယောက်ျားကြိုက်တယ်၊ တချို့ ယောက်ျားတွေက ယောက်ျားပဲ ကြိုက်ပြီးတော့ တချို့မိန်းမတွေက မိန်းမပဲ ကြိုက်တယ်။ တချို့ကျတော့လဲ ဘာမှမကြိုက်ဘူး တကိုယ်တည်းနေရတာပဲကြိုက်တယ်။ ကဲ ဘာများထူးလို့လဲ။ ဒီလိုစမေးနေတယ်၊ ဖြေနေရတယ်ဆိုတာကိုက ကိုယ်တွေက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သူများတွေနဲ့ မတူ ထူးခြားနေတယ် လို့ ခွဲလိုက်ပါပြီ။ MSM ဖြစ်ရတာ ဂုဏ်ငယ်စရာမဟုတ်သလို ဂုဏ်ယူစရာလဲမဟုတ်ဘူး ဒါက ကိုယ့်အကြိုက်နဲ့ ကိုယ့်ရွေးချယ်မှုပဲဖြစ်တယ်။ ကိုယ်မြင်တာကတော့ လူတယောက်ဟာ လူ့ကျင့်ဝတ်တွေက သတ်မှတ်ထားတဲ့ ခိုးဆိုးလုယက်တွေ လုပ်မနေဘူး။ ကိုယ့်မိသားစု၊ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင် ကိုယ့်အသိုင်းအဝိုင်း ဒီ့ထက်ပိုကျယ်ကျယ်ပြောရရင် ကိုယ့်နိုင်ငံ အတွက် တထောင့်တနေရာ တတတ်တအားလုပ်ပေးနေနိုင်တယ် ဆိုရင် တန်ဖိုးရှိတာပဲ။ ယောက်ျားမို့လို့ မိန်းမထက်ပိုမြတ်တယ်တို့ မိန်းမက ယောက်ျားတွေထက် တဆင့်နိမ့်တယ်တို့ဆိုတာတွေက ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ အမြင်တွေပါ။ လောကကြီးမှာ ကောင်းတာလုပ်တဲ့လူက ပိုမြင့်မြတ်ပြီး ဆိုးတာလုပ်တဲ့လူက မမြင့်မြတ်ဘူး ဒါပဲ။ ယောက်ျားမိန်းမတောင် အဆင့်ခွဲစရာမလိုရင် MSM တွေဆို ပိုလို့တောင် အဆင့်ခွဲစရာမလိုသေးတယ်။ လူတယောက်ကို သူက ဘာလဲဆိုတာနဲ့ ဆုံးဖြတ်လို့မရပါဘူး။ သူဘာလုပ်ခဲ့သလဲ၊ ဘာလုပ်နေလဲပဲ ကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်ရပါမယ်။ ထမင်းကိုကြိုက်တဲ့ စားတဲ့ အာရှသားတွေထက် ပေါင်မုန့်စားတဲ့ ဘုိုတွေအဖြူတွေ က ပိုမမြင့်မြတ်သလိုပဲ မိန်းမကို ကြိုက်တဲ့ ယောက်ျားက ယောက်ျားချင်းချင်းကြိုက်တဲ့ ယောက်ျားထက်ပိုမမြင့်မြတ်ပါဘူး။ သူ့အလုပ်ကသာ သူ့တန်ဖိုးကို အဆုံးအဖြတ်ပေးမှာပါ။ MSM အများစုကိုလဲ အဲ့လိုမမြင်ကြဖို့ ကိုယ့်ကို အဲ့လိုလာမြင်ကြရင်လဲ လက်မခံကြဖို့ အားပေးပြောကြားချင်ပါတယ်။
လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ လူထု အကျိုးပြု အလုပ်တွေ
အခုလက်ရှိကတော့ ဘန်ကောက်အခြေစိုက် အစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတခုမှာ positive MSM တွေအတွက် အလုပ်လုပ်နေပါတယ်။ သင်တန်းပေးတာတွေ၊ စီမံကိန်းချပေးတာတွေ၊ ရံပုံငွေပေးတာတွေ၊ သုတေသနလုပ်ပေးတာတွေပေါ့။ MSM တွေနဲ့ အလုပ်လုပ်ရတာပျော်တယ်။ ကိုယ်တိုင်လဲ MSM ဖြစ်တော့ ကိုယ့်နဲ့သက်ရွယ်တန်းတူ ပီးယားတွေကို အလုပ်လုပ်ပေးနိုင်တာ ကျေနပ်ပါတယ်။ တခါတခါ ထိန်းရခက်တာကတော့ MSM သဘာဝ ပျော်ပျော်နေတတ်တာကိုးနော်။
ပရဟိတ လုပ်ချင်စိတ် ဘယ်လိုစခဲ့တာလဲ
MSM တွေအတွက် အလုပ်လုပ်ပေးချင်စိတ်ဘယ်လိုစဖြစ်လာသလဲဆိုတော့ ကိုယ်ဒီပရဟိတ အလုပ်တွေစလုပ်ဖြစ်လာတာ ပေါ့စတစ်ဖြစ်မှပါ။ အရင်က ကိုယ်က အတ္တကြီးတယ် ဒေါသလဲကြီးတယ် ခုထိလဲ ကြီးတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ပေါ့စတစ်ဖြစ်သွားတော့ တော်တော်ပြောင်းလဲသွားတယ် အသိတရားရသွားတယ်ထင်တာပဲ။ အရင်ကထက်စာရင်တော့ လူတွေကို နည်းနည်းပို လုပ်ပေးချင်စိတ်ရှိလာတယ်။ အရင်ကတော့ ကိုယ့်အတွက်ကိုပိုကြည့်တာပေါ့။ အဲ့တာနဲ့ ပေါ့စတစ်ဖြစ်တော့ ဒီ အန်ဂျီအို လုပ်ငန်းတွေထဲကိုရောက်လာပါတယ်။ အဲ့ကနေစလုပ်ဖြစ်တာပေါ့။ အစပိုင်းကတော့ ပေါ့စတစ်တွေအတွက်ပဲ ဦးစားပေးလုပ်ခဲ့တယ် ၅ နှစ်လောက်ပေါ့။ ခုနောက်ပိုင်းတော့ MSM တွေအတွက်ပိုလုပ်ပေးဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ပေါ့စတစ်ဖြစ်သွားတာ ကိုယ့်အတွက်ကတော့ ဘဝတဆစ်ချိုးပါပဲ။ အကွေ့ကြီးကြီးကွေ့လိုက်ရတာပေါ့ ဒါပေမယ့် အကွေ့ကောင်းဖြစ်သွားတယ်။ ပေါ့စတစ်ဖြစ်တာကောင်းတယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ ကိုယ့်အတွက်ကိုပြောတာ။ ကိုယ်က ပေါ့စတစ်ဖြစ်သွားမှ ပိုလူဆန်လာတာကိုး။
ဘဝမှာ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အခက်အခဲ တခု ဘယ်လိုကျော်ဖြတ်ခဲ့လဲ
အခက်အခဲတွေကတော့ MSM မဖြစ်လဲရှိနေမှာပဲ။ ပေါ့စတစ်မဖြစ်လဲရှိနေမှာပဲ။ ထုတ်ညည်းနေရင်လဲ ကိုယ့်အခက်မှ ခက်တယ်ဖြစ်နေမယ်။ ကိုယ်ထင်တာကတော့ ဘယ်သူမှာမဆို သူ့အခက်အခဲနဲ့ သူတော့ ရှိနေကြတာချည်းပါပဲ။ လူတိုင်းလူတိုင်းပေါ့။ ရင်ဆိုင်ရဲဖို့ပဲလိုတယ်။ မကြောက်ဖို့ အရှုံးမပေးဖို့ သတ္တိရှိဖို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိဖို့ အဲ့တာတွေရှိရင် အရာရာ ရင်ဆိုင်လို့ရပြီ။ တကယ်လို့ကိုယ်သာ စိတ်ပျော့ပျော့ညံ့ညံ့နဲ့ ဘဝကို လွယ်လွယ်အရှုံးပေးခဲ့ရင် ကိုယ် ၂၀၀၃ ကတည်းက သေပြီ။ အရာရာစိတ်ပဲ။ စိတ်ဓါတ်သာမကျနဲ့ ပြန်စဖို့ ဘယ်တော့မှ နောက်မကျဘူး။ ကိုယ်ကတော့ အဲ့လိုပဲခံယူတယ်။
နောက်တခုပြောချင်တာက ကိုယ်က ၁၀တန်းပဲအောင်ထားတာပါ။ ဒါပေမယ့် အခုလုပ်ငန်းထဲမှာဆိုရင် သူ့အတိုင်းအတာနဲ့သူ အတော်အသင့်အောင်မြင်တယ်ပြောရမယ်။ ပြောချင်တာက ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ် MSM ဖြစ်လို့ အတန်းပညာနိမ့်လို့ ဆိုတဲ့ အမြင်တွေနဲ့ အားမငယ်စေချင်ဘူး။ ကိုယ်တွေရှေ့မှာ ဒီလိုပဲ အတန်းပညာနိမ့်ပေမယ့် အောင်မြင်နေတဲ့ အန်တီချမ်းတယောက်လုံးရှိနေတယ်။ ကိုယ်တွေ MSM တွေက ယောက်ျားတွေ မိန်းမတွေနဲ့ တန်းတူယှဉ်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တဆင့်နှိမ့်ပြီး ယှဉ်စရာမလိုဘူး။ အဓိက က အသိပညာ နဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားပါ။ နောက်တခုလဲ ပြောချင်သေးတယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကွန်မြူနတီဆိုတာနဲ့ အခွင့်အရေးတွေရတော့မယ်လို့်လဲ မထင်ကြပါနဲ့။ ပေါ့စတစ်ဖြစ်လို့ MSM ဖြစ်လို့အထောက်အပံ့တွေ အကူအညီတွေတော့ ရတော့မယ် မထင်ပါနဲ့။ လောကကြီးမှာ အလကားရတဲ့ နေ့လည်စာဆိုတာ မရှိပါဘူး။ ကိုယ်တွေက ဘယ်လုိုအနေအထားလဲ ဘာလုပ်ရမှာလဲ ဆိုတာသိတတ် မြင်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။ အဓိက က ပထမဆုံး ကိုယ့်မိသားစုထဲမှာ အသုံးကျတဲ့ လူတယောက်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ နောက်ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင် နောက်တော့ အဲ့ထက်ပိုကျယ်လာတော့ ကိုယ့်အသိုင်းအဝိုင်း နောက်တော့ နိုင်ငံ အတွက်ပေါ့။ ဘာပဲလုပ်နေလုပ်နေ ဘယ်နေရာကပဲ လုပ်နေလုပ်နေ ကိုယ့်လိပ်ပြာကိုယ်လုံတဲ့ အလုပ်မျိုးသာဖြစ်ပါစေ။ လဲကျရင် ပူမနေနဲ့ ငိုမနေနဲ့ ကောက်ထပစ်လိုက် အခါ ၁၀၀ လဲကျရင် ၁၀၁ ကြိမ်ပြန်ထပစ်လိုက်။ ဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးနဲ့ စိတ်ဓါတ်မကျနဲ့။
Posted by တီချမ်း at 2:58 PM
Rita May 4, 2012 at 6:04 PM
ကိုယ်ကတော့ ပုန်းနေတဲ့သူတွေပါ ပွင့်သွားစေချင်တာပဲ။ မဟုတ်ရင် အဲဒါတွေက ရှော့ခ်ရှိတယ်။
Khin Thaw Dar Yin May 4, 2012 at 7:40 PM
t chan facebook thi chin lol ya per lar shinn ?:)
So proud of u .......... Keep on going, bro.
မြတ်ကြည် May 4, 2012 at 10:30 PM
I like All of your answers. Wow.. I am impressed by the way you have been standing tall.. For me i have never looked down on someone becos of that. I felt happy seeing your couple photos on fb last week.
ခရစ္စတလ် May 5, 2012 at 7:39 AM
ဘဝဆိုတာ နေတတ်ရင် ကျေနပ်စရာပေါ့၊
GREAT YOUR WORDS!!!
thank you for all of your words.all of your words are valuable.we must face all difficulities of life brave.you are great.
Anonymous May 7, 2012 at 12:13 PM
ဘရဏီ May 14, 2012 at 4:07 PM
Well done T-chan .I'm so impressed :) .
nandar May 16, 2012 at 8:56 PM
Maribel Artaste June 28, 2012 at 6:49 PM